Plastic Manufacturers & Suppliers - China Plastic Factory
Clear mkpuchi Disposable Plastic Sushi Box
Ma ị na-eme atụmatụ ịgbanwe igbe sushi nwere, ma ọ bụ na ịchọrọ ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa akụ na ụba, zụta ihe ọkụ eletrik na ntanetị site na Team Chunkai. Ngwaahịa anyị bụ ndị a na-achọkarị n'etiti ndị ahịa n'ihi atụmatụ ha dị ka iwu siri ike, mgbochi mmiri, nchara nchara na ndụ ogologo ndụ. Site n'enyemaka nke ndị ọkachamara anyị, anyị na-enye ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ nha dịka iche iche dị iche iche nke ndị ahịa anyị bara uru. Na mgbakwunye, anyị ụlọ ọrụ specializes na n'ichepụta ọkachamara Sushi igbe, disposable plastic Sushi igbe.
Plastic Ọma F alụlụụ Sprayer na overcap
Ndị ezigbo nwanyị ji nwayọọ na-agba ihe ndị dị n ’ebe buru ibu ibu. N'adịghị ka ịwụkwasị ngwaahịa, mgbe ị na-eji mkpuchi mister, ihe ndị ahụ anaghị asọ ma ọ bụ jupụta ebe ndị ahụ, kama nke ahụ, ha na-etinye akwa oyi akwa nke ngwaahịa ndị ahụ, nke bụ mgbakwunye maka ihe ndị dị ka ịgba ntutu na isi. Enwere ike gbanwee ego etinyere site na ịgba ọzọ. A bịa n'iji fresheners ikuku, igwe ojii nke ezigbo alụlụụ na-agbasasị dị mfe ka ọ na-anọ n'ikuku ruo ogologo oge na irighiri ihe ndị ahụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nchacha nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka iji sprayers na-akpalite, nke na-ewepụta ngwaahịa na mbara ala na nnukwu mgbapụ, ndị na-ehicha windo na ngwaahịa nhicha osisi na-eme nke ọma mgbe a na-agba ha site na mma mister.
Disposable ngaji mma Fork Cutlery Tableware
Disposable Spoons Knife Fork Cutlery Tableware na-eme ka ndụ dị mfe na azụmaahịa, ndị kama ịsacha ọtụtụ ndụdụ, ngaji, na mma, nwere ike ịjụ ndị na-egbu ihe ka ha tụfuo ihe ha na-eri ozugbo ha risịrị nri. Ọ na-emekwa ka ndụ dịrị ndị na-azụ ahịa oriri ma ọ bụ oriri na ọbịa nwere nnukwu ọbịa.
Agụụ Nchekwa akpa na Space nchekwa
Agụụ akpa ma ọ bụ mkpakọ akpa aghọwo nnọọ ewu ewu na nke ikpeazụ afọ ole na ole ndị ọzọ malitere compressing uwe na akwa ịzọpụta ohere.
Na-arụ ọrụ na ihe nhicha ọ bụla, dị na ya. Vingchekwa ebe nchekwa, oghere 80% belatara
Ugboro abụọ akara mkpọchi uwe na-airtight na waterproof, a na ịba uru clip mmasị na akpa ọ bụla
Ọ dịghị ebu na ebu, chedo uwe gị, akwa ụra, ohiri isi, blanket
350ml Abụba U-udi Pet Plastic ihe ọiceụ Bụ Bottle
Nke a 350ml Abụba U-udi Pet Plastic ihe ọ Bụ Bụ Bottle bụ mara mma nke ukwuu, adabara ihe ọ juiceụ juiceụ, ọ drinksụ drinksụ na water.It eji nri ọkwa PET ihe onwunwe, BPA free, ekwekọghị na-ezu ohi àmà cap.We nwere ike hazie agba nke kalama, nwekwara labeelu ma ọ bụ na-ebipụta logo na karama.
Uzo Plastic Pee mkpọchi uwe akpa
Nke a Pipe Pee Pee mkpọchi uwe Uwe e mere nke ọhụrụ Pee ihe onwunwe, ike ekweghị ekwe, ezigbo ọdịdị, mfe dee, mara mma na-emesapụ aka, nwere ike kpọrọ na e biri ebi. The Pipe Pee Pee mkpọchi uwe Uwe zuru okè akara mkpọchi uwe na elu nsogbu mgbawa- àmà akara onu.
Chubby Clear Milk Tea PITA karama
Nke a Chubby Clear Milk Tea PITA karama mara ezigbo mma, adabara mmiri ara ehi tii, ọ drinksụ drinksụ na water.It eji nri ọkwa PET ihe onwunwe, BPA free, ekwekọghị na-ezu ohi àmà cap.We nwere ike hazie agba nke kalama, nwekwara labeelu ma ọ bụ na-ebipụta logo on kalama.
Ihe okike a bu ihe eji emeputa mmiri mara nma nke oma maka mmiri ịnweta mmiri, ihe onunu na mmiri. kalama.
Ntụpọ-akpaka akpaaka na-emechi akpa mkpofu ahịhịa
Nke a Dot-break Automatic Closing Rope Garbage Bag is made of new HDPE material, ike siri ike, ọdịdị dị mma, dị mfe ide, mara mma ma dị mfe iji.
Abụọ ogige Plastic Food akpa
Nke a na-Abụọ Plastic Plastic Food akpa bụ nnọọ ewu ewu na-ekpo ọkụ na-ere,
Ọ nwere uru dị n'okpuru:
Debe nri ohuru: Nnukwu nri nri nri ehihie iji mee ka nri gị dị ọhụrụ na nri preps dị mfe.
Safety: The akpa na mkpuchi na-mere site BPA-Free na Food-mezuwo Safe PP ihe.
Reusable na inogide: The akpa e mere na stackable na friza ma ọ bụ nri ehihie akpa, na-eri eri-àmà na ikuku uko mkpuchi.
Microwave / friza / asacha efere Safe On Top ogbe: Iguzogide okpomọkụ si -40 ° F ka 320 ° F (Ma ọ bụ -40 ° C na 160 ° C)
Agụụ Sealer akpa maka Food nchekwa
Nke a agụụ Sealer akpa maka Food nchekwa bụ nnọọ ewu ewu na-ekpo ọkụ na-ere.
Nchedo: BPA Na-akwụghị ụgwọ, Simmer na Microwave Nchekwa, Dị Mma maka Sous Vide Isi nri
Otu maka All: Ezubere maka iji ya na igwe nkwakọ ngwaahịa niile
Nrụrụ Dị arọ: Ahịa ọkwa ọtụtụ ihe na-egbochi ikuku oxygen na mmiri ma wepụ ihe ọkụ friza na akpịrị ịkpọ nkụ
Economic: 2 ngwugwu 11 `` obosara, 50 ụkwụ ogologo. nke bụ ụkwụ 100 n'ogologo. Ime ogologo nke akpa gị.
Disposable takeaway Plastic Nchekwa Food akpa
Nke a Disposable Takeaway Plastic Nchekwa Food Container bụ nnọọ ewu ewu na-ekpo ọkụ sell.While nri na-omenala chere nke dị ka ẹdude ke ọnya mkpọ, nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ji ngwaahịa nwere ike irite uru site ọnya nkwakọ. Nhọrọ dị oke mma mgbe ịchọrọ ka ndị ahịa hụ ngwaahịa gị na shelf ụlọ ahịa, enwere ike ịhazi ngwugwu ọnya nwere ọtụtụ atụmatụ na nhọrọ imewe iji gboo mkpa ngwaahịa gị. Ihe nkwupute ọnya na-arụkwa nnukwu ọrụ iji chekwaa ngwaahịa gị ka ọ dị mfe maka ndị na-azụ ya. Tụlee ihe ndị na-esonụ nke ọnya nkwusa.
Ekwentị ： 0086-021-57109876
E-mail ： ahịa@shyilong.cc
Adreesị ： No.1150 Xinlin Road, Zhelin Town, Fengxian District, Shanghai, China
ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị